01-Conversation, Somali: La sheekaysiga Muslimiinta ku saabsan Masiixa | Grace and Truth
Home -- Somali -- 01-Conversation
Qoraa: Abd al-Masih
Qalabka tababarka oo loogu talagalay la wadaaga Masiixa muslimiinta.
Koorsadani waxay ka kooban tahay 8 buug ee soo socda:
1 - Guddiga Weyn ee Ciise Masiix
3 - Sida loo sharaxoIn Kitaabka Quduuska Ah Lama jabin
7 - Xakamaynta ee Iskutallaabta u Sharaxay Muslimiinta
Wadahadalka 1 - Guddiga Weyn ee Ciise Masiix
Maxay Masiixiyiintu ugu baahan yihiin inay la wadaagaan caqiidadooda muslimiinta? Fiiri komishanka weyn ee Ciise xertii ku xirey Matayos 28: 19-20 wuxuu ku siinayaa fahamka sababta iyo sida wasaaradani ay tahay in loo qabto. Guddigii weynaa ee Masiixu halkan waa la barbar dhigay la-taliyayaashii Muxamed ee xertiisa si loo faafiyo Islaamka.
1.02 -- Wacitaanka
1.03 -- Awoodda oo dhan samada iyo dhulka
1.04 -- Therefore Sidaa daraadeed u taggo!
1.05 -- Hagidda Ruuxa
1.06 -- Maxay tahay inaanu bixino?
1.07 -- Dadka oo dhan
1.08 -- Guddiga weyn ee Islaamka
1.09 -- Amarka baabtiiska ee Saddexmidnimada Qudduuska ah
1.10 -- Baabtiisku wuxuu bixiyaa ilaalin iyo nabadgelyo
1.11 -- Baabtiisku - xiriirka khadka korantada ee Ilaah
1.12 -- Adeecitaanka Amarrada Masiixa
1.13 -- Oo wax alla wixii aan kugu amray oo dhan ayaad samaysaan!
1.14 -- Waa maxay ujeeddada Sharciga Masiixa?
1.15 -- Sharciga Muxammad
1.16 -- Hadafka qarsoodiga ah ee sharciga Muxammad iyo Ciise
1.17 -- Waan kula jiraa!
1.18 -- Ilaa dhammaadka adduunka
1.19 -- Ilaa maalinta ugu dambeysa!
1.20 -- Ma Alle iyo Muslimiintiisa?
1.21 -- Afarta Kun oo "Dhamaan" ee Guddiga Weyn
1.22 -- Baaris
Wadahadalka 2 - Ma aha Muslim kasta oo rumeeya oo u maleeyoIsku mid!
Wadahadalka 3 - Sida loo sharaxoIn Kitaabka Quduuska Ah Lama jabin
Caqabadda koowaad ee ugu horreysa ee qofka muslimka ah ee noqota Masiixiyiinta waa caydooda ah in Kitaabka Quduuska ah la musuqmaasuqay. Runtii kani kani waa waxa Quraanku baray, sideese qof muslimiin ah uga caawin kartaa dhisida aaminka Kitaabka Quduuska ah? Su'aalahan waxaa looga hadlayaa iyada oo ku saleysan Axdiga Hore, Axdiga Cusub, dareenka guud, Qur'aanka iyo maraggaaga shakhsi ahaaneed.
3.01 -- Sida loo sharaxoIn Kitaabka Quduuska Ah Lama jabin
3.02 -- Horudhac
3.03 -- Weerarada Quraanka oo ka dhan ah Tawreed
3.04 -- Muslimiintu waxay raadinayaan magaca Muxammad ee Kitaabka Quduuska
3.05 -- Go'aan ka soo horjeeda baybalka
3.06 -- Darajooyinka sunta ah ee Mr Deedat
3.07 -- Kalsoonida ruxeysa ee runta ah ee Kitaabka Quduuska ah
3.07.1 -- Axdiga Hore ee Axdiga Hore Ku Saabsanaanta Mu'miniinta Tawreed iyo Nebiyadii
3.07.2 -- Aamminsanaanta xaqiijinaysa xaqiiqada Muujintii Axdiga Cusub
3.07.3 -- Iswaydaarsi macquul ah bini-aadamka iyo Qumran ayaa u xajistay xaqiiqada Kitaabka Qudduuska
3.07.4 -- Sidee ayuu Quraanka ugu markhaati furayaa xaqiiqada Kitaabka Qudduuska ah?
3.07.5 -- Markhaatiga waayo-aragnimada Masiixiga ah!
3.08 -- Baaris
Wadahadalka 4 - Magacyada iyo Magacyada Masiixa ee Quraanka iyo Kitaabka Qudduuska ah
Wadahadalka 5 - Tobanka Mucjisooyinka ee Masiixa ee Quraanka
Wadahadalka 6 - Sidee qarsoodi ah Midnimada Saddexmidnimada Quduuska ah ayaa lagu sharxi karaa Muslinka?
Wadahadalka 7 - Xakamaynta ee Iskutallaabta u Sharaxay Muslimiinta
Carqaladda saddexaad ee ugu dambaysa ee qofka muslimka ahi noqoshada Masiixiyiintu waa waxay aaminsan yihiin in Masiixu runtii aan la dilin laakiin ay u ekaanaysay inuu iskutallaabta ku qodbay uun. Sidee ayay suurtagal u tahay in lala wadaago Injiilka wiilka Ilaah ee iskutallaabta lagu qodbay muslimiinta inkasta oo ay ka soo horjeedaan aamintadan? Raadi adiga oo akhrinaya talooyinkayaga ku saabsan sida tani ay u suurto gasho iyada oo ku saleysan Axdiga Hore, Axdiga Cusub, fikirka caqli galka ah, Quraanka iyo maragfurkaaga shaqsiyeed.
7.03 -- Ballanqaadka dhimashada dhimashada Masiixa ee Axdiga Hore
7.04 -- Iskutallaabta Ciise Masiix ee Axdiga Cusub
7.05 -- Ilaha caqliga leh ee iskutallaabta Ciise Masiix
7.06 -- Aayado wax ku ool ah oo ku sugan Qur'aanka oo dhimashada Ciise u malaynaya
7.07 -- Naxariista gaarka ah ee qirashada dembiga
7.08 -- Wanka Ilaah
7.09 -- Marqaatiga ka baxsan waayo aragnimada
7.10 -- Baaris
Wadahadalka 8 - Waa Inuu Qofkasta oo Muslim ah Yey Noqotaa Masiixi Dhiman?
Page last modified on March 24, 2020, at 12:35 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.140)